भारत–चीन युद्धको संघारमा रक्षामन्त्री पोखरेलको शंकास्पद गतिविधिले खैलाबैला ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारत–चीन युद्धको संघारमा रक्षामन्त्री पोखरेलको शंकास्पद गतिविधिले खैलाबैला !
भारत–चीन युद्धको संघारमा रक्षामन्त्री पोखरेलको शंकास्पद गतिविधिले खैलाबैला !
काठमाडौं – नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार बनेदेखि चिनियाँ गतिविधि तिब्र बनेको छ । चिनियाँ गतिविधि यती धेरै बढ्यो कि चीन र नेपालका दुई सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एउटै मञ्चमा कार्यक्रमहरू गर्न थालेका छन् ।एक वर्ष अगाडि चिनियाँ पार्टीका शक्तिशाली नेताहरू काठमाडौंमा आएर नेकपाका नेताहरूलाई प्रशिक्षण नै दिएर गए । नेपाल र चीनका कम्युनिस्ट नेता र सरकारबीच पनि बाक्लै सम्बन्धहरू भइरहेका छन् ।
दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सम्वाद र छलफलहरू आदान प्रदान गर्नु स्वभाविक भए पनि एउटै पार्टी भए जसरी भइरहेका चीन र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधि आपत्ति जनक छन् । उनीहरूले एउटै ब्यानरमा दुबै देशका कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लेखेका छन् ।यो संकेत भनेको नेपालमा चीनको गतिविधि बढेको हो । विश्वभरि आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आएको चीनले नेपाललाई पनि दवावमा राख्न चाहन्छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
नेपालमा चीनमाथि सत्तारुढ नेकपाले भित्र्याइरहेको खुला हस्तक्षेप दीर्घकालमा नेपालका लागि ठूलो नोक्सानी हुनेछ । नेपालमा चीनको यसैगरी हस्तक्षेप र गतिविधि बढ्दै गयो भने अमेरिकासहितका पश्चिमा राष्ट्रहरू चुप बस्ने छैनन् । त्यसको प्रभाव के हुन्छ त्यस बेला थाहा हुनेछ ।
चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालले पनि चीनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर, यसरी नाङ्गो नाच नेपालका लागि राम्रो होइन । नेकपाले चिनियाँ राजनीतिक गतिविधि बढाउने कार्यको अहिले विरोध गरिन भने नेपालका लागि उचित हुनेछैन ।
नेपाललाई चीन निकट बनाउनुमा भारतको ठूलो भूमिका छ । सधैँ नेपालको आन्तरिक, राजनीतिक र सिमानामा भारतको अतिक्रमण र हस्तक्षेपले नेपालको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) चीनतिर झुकाब राख्न बाध्य भयो । नेकपाले चीनलाई नेपालमा खेल्नका लागि रातो कार्पेट नै बिच्छ्याइदिएको छ । शुक्रबार भिडियोमार्फत नेपाल र चीनका कम्युनिस्ट नेताहरूको सम्वाद भएको छ ।
नेपाल–भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद भइरहेको छ । चीन र भारतबीच गलवानमा सीमा विवाद भइरहेका बेला नेपाल र चीनका कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको यो भिडियो कन्फ्रेन्सलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको शुक्रबारको प्रशिक्षणमा नेपालका रक्षा मन्त्री समेत रहेका नेकपाका स्कुल विभागका प्रमुख ईश्वर पोखरेल सहभागी छन् ।
रक्षामन्त्री पोखरेलको यो हर्कतले नेपाल–भारतबीचको वार्तालाई झन् टाढा पुर्‍याइदिएको छ । रक्षामन्त्री पोखरेलले नै भारतलाई चिढ्याउने गरेर यसरी हर्कत गरेपछि भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाल भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन गर्ने भनिएको कुटनैतिक वार्तालाई के असर गर्छ ? धेरैको चिन्ताको विषय बनेको छ ।नेकपाको विदेश विभागलाई समेत जानकारी नदिएर रक्षामन्त्री पोखरेलले चीनसँग गरिएको यो प्रशिक्षणले चीनलाई नेपालमा खुला राजनीति गर्न निम्ताएको छ ।
नेकपाको विदेश विभागका प्रमुख वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल छन् । नेता नेपाललाई पूर्व जानकारी नै नदिएर रक्षामन्त्री पोखरेलले दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राखेर चिनियाँहरूसँग भर्चुअल सम्वाद गरेका छन् ।चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ थाओ र उपप्रमुख ग्वाओलगायतका नेता सहभागी रहेको नेकपाले जनाएको छ ।
नेकपाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग शुक्रबार एउटै ब्यानरमा गरेको जस्तो भर्चुअल (भिडियो) प्रशिक्षण अन्य कुनै दलले भारतीय कुनै पार्टीसँग गरेको भए काठमाडौंका सडक र सामाजिक सञ्जालमा ‘भारतीय दलाल’ भनेर चर्को आलोचना हुने थियो । तर, सत्तारुढ नेकपाले नै रक्षामन्त्रीलाई राखेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको यो छलफलका विषयमा धेरैले चासो नै दिएका छैनन् ।
नेकपालाई यसरी चिनियाँ हस्तक्षेप देशभित्र भित्र्याउन मिल्छ कि मिल्दैन विचरणीय कुरा छ । दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीच भाइचारा राख्नु उचित हो । यसरी रक्षामन्त्रीलाई नै राखेर सम्वाद गर्ने कार्यले के अर्थ राख्छ ? नेपकका नेताहरूले समयमा जानकारी दिनैपर्छ ।
नेपालले भारत र चीनसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले चीनलाई मात्रै खुसी पार्ने गतिविधि नेपालका लागि उचित हुनेछैन ।
भारतलाई चिड्उने कर्या पनि नेपालका लागि भलो हुँदैन । नेपालको कम्युनिस्ट सरकार र नेकपाले चीन र भारत दुबैको हस्तक्षेप भित्र्याउनु हुँदैन ।